I-Glossary Glossary Inkcazo yeNgqungquthela
Kwi-chemistry, ukukhawuleza ukwenza i- compound ye-compound mhlawumbi ngokusabela i- salts ezimbini okanye ngokutshintsha iqondo lokushisa ukuchaphazela ukuzululiswa kwe- compound . Kwakhona, igama linikezelwa kwomelele eyenziwe ngenxa yesiphumo sokuphendula .
Ukunciphisa kungabonisa ukuba kwenzeka ukukhishwa kwamakhemikhali, kodwa kunokuthi kwenzeke ukuba ingcinezelo yongqingili idlula ubuninzi bayo. Ukunxila kulandelwa ngumcimbi obizwa ngokuba yi-nucleation, okuyiyo xa iincinci ezincinci zingabonakali kunye okanye zenze i-interface kunye nomhlaba, njengodonga lwesitya okanye i-crystal yembewu.
Isigama sinokubonakala sidideka. Nantsi indlela esebenza ngayo: Ukwenza uqinileyo kwisisombululo kuthiwa yimvula . Ikhemikhali eyenza iqinile ukuba iqulunqwe kwisisombululo samanzi kuthiwa yi- precipitant . Iqinika libizwa ngokuba yi- precipitate . Ukuba ubungakanani beengqununu zeklasi ezingekho phantsi kwezinto ezincinci okanye ubuncinci obunamandla bokubamba isisiseko phantsi kwesitya, i-precipitate ingasasazwa ngokulinganayo kulo lonke utywala, ngokumisa ukumiswa . Ukwahlula kubhekisele kuyo nayiphi na inkqubo eyahlula ukukhawuleza kwisahlulo samanzi sesisombululo, esibizwa ngokuba yi- supernate . Inkqubo eqhelekileyo yokudambisa i-centrifugation. Emva kokuba i-precipitate ifunyenwe, umgubo okhulayo unokuthiwa "intyatyambo".
Ukudibanisa i-nitrate yesilivere kunye ne-sodium chloride emanzini kuya kubangela ukuba i-chloride yesilivere ikhuphe isisombululo njengomeleleyo .
Kulo mzekelo, i-precipitate i-chloride yesiliva.
Xa ubhala impendulo yeekhemikhali, ubukho bendawo echanekileyo bunokuboniswa ngokulandela ifom ye-khemikhali ngelokuhla:
Ag + + Cl - → AgCl ↓
Iinqununu zingasetyenziselwa ukuchonga i-cation okanye anion ityuwa njengenxalenye yohlalutyo olulungileyo .
Ukutshintshwa kweensimbi , ngokukodwa, zaziwa ukuba zenze imibala eyahlukeneyo yamanzi ngokuxhomekeka kwi-identity element kunye ne-oxidation state. Impendulo yokunciphisa isetyenziselwa ukususa isaliti emanzini, ukwahlukanisa iimveliso kunye nokulungiselela iigigments.
Inkqubo ebizwa ngokuba yinkcenkceshe yokuguga okanye ukugaya kwenzeka xa i-precipitate entsha ivumelekile ukuba ihlale isisombululo sayo. Ngokuqhelekileyo ukushisa kwesisombululo kwanda. Ukugonywa kungenza iinqununu ezinkulu zihlambuluke. Inkqubo ekhokelela kwesi siphumo iyaziwa ngokuba yi-Ostwald yokuvuthwa.
I-Oxidizing Agent Definition kunye nemizekelo
Ukuchithwa kwe-Spectroscopy Inkcazo
I-Traffic Tracer Inkcazo
Yiyiphi indlela engaqinisekiyo yohlobo kunye nendlela yokuyifumana
Iziganeko kunye neMigqaliselo yeCandelo LokuQala Lokuqala leXesha le-19
7 Izinto Ongayenza Ukuze Uncede Ababaleki Behlabathi
Ty Beanie Bantwana
Iingoma ezigqwesileyo kakhulu ngelizwe le-Superstar uBrad Paisley
Ukuphila Ngombane: 10 Amaninzi Ngeyona Eninzi Imimandla Yombane